Iko 4 Kukanganisa Kwaunogona Kuita Pasina An Interpol Gweta | Interpol UAE
Zvikanganiso zvina zvaunogona Kuita Pasina Gweta reInterpol
Interpol inomirira iyo International Criminal Police Organisation, uye isangano rezvematongerwo enyika rine nyika makumi mana nenomwe. Idzi nhengo dzenhengo dzinoshanda pamwechete kuburikidza nekugovana uye kuwana data kuchengetedza nyika ive nzvimbo yakachengeteka. Kazhinji, paunenge uchirwa hondo yepamutemo yepasi rese, unofanirwa kutora kune vamwe vakuru uye vane simba vanopikisa. Iri ibasa rakaoma kune chero munhu, asi rakaoma kana usiri kujairana nekuoma kwemutemo wepasi rese.
Magweta edu eInterpol anga aine vatengi vazhinji vanga vasina kugadzirira zvinetswa zvinouya nehondo dzenyika dzepamutemo pakambani yedu yemagweta. Izvi zvinowanzoitwa zvakashata dai vakamboedza kugadzirisa zvinhu vega vasati vaita masevhisi edu.
Kubata neInterpol kunoda danho rakadzama rehunyanzvi uye hunyanzvi, uye izvi zvinogona kuwanikwa chete negweta rinoshanda mumutemo wepasi rose wematsotsi. Haasi ese gweta tsotsi anogona kushanda segweta reInterpol. Uku ndiko kumwe kwekukanganisa kunoitwa nevanhu pavanotarisana nehondo dzepamutemo pamiganhu. Isu takaona ino nguva uye nguva zvakare nevatengi vanouya kwatiri kuzobatsirwa.
Muchikamu chino, tinonyatsotsanangura zvina zvezvikanganiso izvi tiine tarisiro yekuti iwe uchazozvifunga kana ukambozviwana uchirwa nehondo yenyika dzepamutemo. Asi zvisati zvaitika, "Chii chinonzi Interpol?"
Interpol - Iyo International Criminal Police Sangano isangano repasi rose remapurisa rakagadzirwa kurwisa mhosva dzepasi rose. Sangano rine nyika makumi mana nenomwe, uye hofisi yaro huru iri muLyon, France. Nyika dzenhengo dzine network yakagadzirwa kuburikidza nekushandisa kugovana nekuwana dhata inoita kuti zvikwanisike kurongedza kuedza kwekurwisa mhosva kumiganhu yenyika dzese.
Nyika dzenhengo dzine zvibvumirano pakati pavo, zvichiita kuti zvive nyore kuti munhu anopomerwa mhosva kune imwe nyika asungwe kune imwe nyika nekuda kwemhosva iyi. Zvese zvinodikanwa ndezvekuti nyika inorekodha isa data remunhu pane network yaInterpol. Interpol inozopa chiziviso padandemutande ravo vachizivisa nyika dziri nhengo kuti mukana wevanopomerwa kutora dziviriro munyika mavo.
Chero nyika inowanikwa munhu anopomerwa, nekuda kwechibvumirano chavanacho nenyika inozivisa, anobva asunga nekuendesa munhu iyeye kuti atarisane nemutemo munyika inoshuma.
Chirevo cheInterpol chikumbiro chepamutemo chekudyidzana kwenyika dzenhengo mukubata tsotsi. Chikumbiro chinowanzoiswa nehurongwa hwekutonga kwehurumende iri kupa, uye ruzivo nezveanopomerwa rwunosanganisirwa muchikumbiro. Iyo Interpol Cherechedzo chishandiso icho nhengo dzenyika dzinochengetedza kurongeka pamiganhu.
Interpol ine notices nomwe dzakasiyana dzinoshandiswa kugovana ruzivo pakati penhengo dzayo. Ivo vatsvuku, bhuruu, girini, orenji, yero, nhema, uye vana zviziviso.
Chiziviso chitsvuku cheInterpol chinopihwa kana munhu akapomerwa mhosva hombe. Chiziviso ichi chinobvumidza nyika dzenhengo kuti dzitevere munhu anenge achifungidzirwa, dzichengete, uye, zvichienderana nemamiriro ezvinhu, vavasunge kudzamara nyika yavo yakumbira kudzoserwa.
The Interpol chiziviso chebhuruu chinopihwa apo nyika iri kupa iri kutsvaga munhu anofungidzirwa uye isingazive kwavanowanikwa. Chiziviso chinoisa nyika dziri nhengo kungwarira kuti vatarise vafungidziri, uye kana ikawanikwa mune imwe yenyika, nyika iyoyo inozivisa nyika irikuburitsa mumhan'ari mukati memiganhu yavo.
The Interpol chiziviso chegirini chinoshanda zvakangofanana nechero chitsvuku, kunze kwekunge chakapihwa mhosva dzakakomba zvakanyanya pane redhiyo ziviso.
The Interpol orenji ziviso dzinoburitswa apo nyika dzinoda kuyambira pamusoro pevaya vanofungidzirwa kana zviitiko zvinokonzeresa kutyisidzira kweruzhinji.
The Interpol yero ziviso inopihwa apo nyika irikupa inoda rubatsiro rwepasi rese mukutsvaga vanhu vasipo, kazhinji vana kana vanhu vasingakwanise kuzvizivisa.
Interpol Zviziviso zvevatema zvinopihwa kutsvaga nekutsvaga vanhu vanofira munyika dzavasiri vagari.
Sezvinoreva zita iri, zviziviso zvevana zvinoburitswa kana vana vasipo, uye nyika inoburitsa inoda kutsvaga kuburikidza neInterpol.
Zvikanganiso zvina zvakajairika zvaunogona kuita nezveInterpol
Mhedziso zhinji dzakagadzirwa dzakatenderedza Interpol, izvo zvavanomirira nezvavanoita. Aya mafungiro asiri iwo akakonzera kuti vanhu vazhinji vatambure mhedzisiro yavaisazotambura dai vaiziva zvirinani. Mamwe acho ndeaya:
1. Kufunga kuti Interpol ibazi repasi rese rekuchengetedza mutemo
Kunyange Interpol iri chishandiso chinobudirira mukuzadzikisa kudyidzana kwenyika dzepasi rose mukurwisa utsotsi hwepasi rose, haisi yezvemitemo yenyika. Asi, isangano rakavakirwa pakubatsirana pakati pevane masimba ekuchengetedza mutemo.
Zvese Interpol zvainoita kugovana ruzivo pakati pevamiriri vemitemo venyika dzenhengo dzekurwisa mhosva. Interpol, pachayo, inoshanda mukusarerekera zvachose uye nekuremekedza kodzero dzevanhu vevanofungidzirwa.
2. Kufunga kuti chiziviso cheInterpol chakaenzana nemvumo yekusungwa
Uku kukanganisa kwakajairika kunoitwa nevanhu, kunyanya neInterpol's red notice. Cherechedzo tsvuku haisi waranti yekusungwa; pachinzvimbo, irwo ruzivo nezve munhu anofungidzirwa kuti akakomba mhosva. Chiziviso Chitsvuku chingori chikumbiro chevamiriri vemitemo venyika dziri nhengo kuti vatarise, vawane, uye "vagare" vasunge munhu akapomerwa.
Interpol haiiti kusunga; ndiwo masangano anochengetedza mutemo emunyika munowanikwa mutsotsi anozviita. Kunyangwe zvakadaro, vamiriri vemitemo venyika vanowanikwa mumutsva vachiri kufanira kutevedzera nzira dzekutonga mukubata mupomeri. Kureva kuti gwaro rekusungwa richiri kufanira kupihwa musungwa asati asungwa.
3. Kufunga kuti Red Chiziviso inopokana uye haigone kupikiswa
Ino yechipiri yepedyo yekutenda kuti chiziviso chitsvuku igwaro rekusungwa. Kazhinji, kana chiziviso chitsvuku chikapihwa pamusoro pemunhu, nyika yavanowanikwa inoomesa midziyo yavo uye kudzosera mavhiza avo. Ivo zvakare vacharasikirwa chero basa ravanaro uye vanotambura kukuvara kune kwavo mukurumbira.
Kuve chinangwa cheye red chiziviso hakufadzi. Kana yako nyika ikaburitsa imwe yakakukomberedza, iwe unogona uye unofanirwa kupokana chiziviso. Dzimwe nzira dzinogona kupokana neRed Cherechedzo dziri kuidenha apo painopesana nemitemo yeInterpol. Mitemo inosanganisira:
Interpol haigone kupindira mune chero chiitiko chezvematongerwo enyika, zvechiuto, zvechitendero, kana zvemarudzi. Nekudaro, kana iwe uchinzwa kuti chitsvuku chiziviso chakapihwa uchipesana newe nekuda kwechimwe chezvikonzero zviri pamusoro, iwe unofanirwa kuzvipikisa.
Interpol haigone kupindira kana mhosva yetsvuku yakabva mukutyorwa kwemitemo yekutonga kana mirau kana makakatanwa ega.
Kunze kweavo vataurwa pamusoro, pane dzimwe nzira dzaungapikisane neRed Cherechedzo. Nekudaro, iwe unofanirwa kuchengetedza masevhisi ehunyanzvi wepasi rose gweta gweta kuti uwane dzimwe idzi nzira.
4. Kufunga kuti chero nyika inogona kuburitsa Red Chiso chero chikonzero chavanoona chakakodzera
Maitiro akaratidzira kuti dzimwe nyika dzakakodzera network huru yeInterpol kune zvinangwa zvisiri izvo zvakagadzirwa nesangano. Vanhu vazhinji vakawirwa nekushungurudzwa uku, uye nyika dzavo dzakaenda nazvo nekuti vanhu vane hanya havana kuziva zviri nani.
Tsvaga rubatsiro rwehunyanzvi uye svika kune edu magweta eInterpol muUAE nhasi!
Magweta edu eInterpol ku Amal Khamis Vamiriri nevanoona nezveMutemo ndiwo akanakisa muUAE. Isu takakura zvakakwana kuti tikupe masevhisi epamutemo aunoda, zvisinei kuti nyaya yako yakakura sei, uye idiki zvakakwana kuti ikupe iwe kutarisisa kwakasarudzika iwe kwaunofanirwa.
Amal Khamis Advocates iboka revanyanzvi, vanoonekwa senge nyanzvi mumunda mavo. Isu tine ruzivo rwakanyanya uye makore eruzivo mukutarisira Interpol Notices muUAE.
Kana iwe uchitsvaga magweta eInterpol muUAE, avo vane hunyanzvi, vanoteerera kune zvaunoda uye vanoteerera zvaunonetseka, saka wasvika kurudyi nzvimbo. Takazvipira kupa yakanakisa sevhisi sevhisi kune vese vatengi vedu uye tichaisa mukuedza kuzadzisa zvaunoda.
Chii chimwe? Isu tiri nyanzvi mumutemo wepasi rose wematsotsi uye tinoziva zvese zviripo nezve kubata nenyaya dzeInterpol. Svitsa nhasi nhasi ku gadzirira musangano nesu.